ကလေးများကို ဒဏ်ပေးသင့်ပါသလား ? – Good Health Journal
ကလေးများကို ဒဏ်ပေးသင့်ပါသလား ?
♦ ဒဏ်ပေးတာက သူတို့အပြုအမူအပေါ် လွန်လွန်ကျူးကျူး တုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ♦
သင့်အနေနဲ့ သိစိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသိစိတ် ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးငယ်ကို ဒဏ်ပေးလိုက်တာ က သူတို့တွေအတွက် စိတ်နာကျင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်နဲ့ သင့်ကလေးငယ်အပေါ်မှာ အဆိုးမြင်တဲ့စိတ် ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
♦ ပျင်းရိတဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ် ♦
ဒဏ်ပေးတာက သင်နဲ့သင့်ကလေးငယ်ကြား ဆက်သွယ်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက သင်မကြိုက်တဲ့အပြုအမူတွေပြုလုပ် တဲ့အတွက် သင်က ဒါကို တန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူတို့ မကြိုက်တာကို ပြန်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ တို့ကို သေချာမရှင်းပြဘဲ၊ သူတို့နဲ့ သေချာညှိနှိုင်းမှုမပြု လုပ်ဘဲ ဒီလိုအလွယ်လုပ်လိုက်တာက ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်အောင် မြေတောင် မြှောက်ပေးတဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ပါဘူး။
♦ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့အကျင့်ကို တုံ့ဆိုင်းစေပါတယ် ♦
မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိကလေးငယ်တွေကို သူ တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ် အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ဖို့ သွန်သင်ပြသပေးပါမှ အဲဒီကလေးဟာ လိမ္မာရေးခြားရှိပြီး ထက်မြက်တဲ့ကလေး ဖြစ်လာမှာပါ။ သင်က သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့အပြုအမူကို သူနားလည်အောင် သေချာမရှင်းပြဘဲ သူ့ကိုဒဏ် ပေးမယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ ဘယ်အရာကမှားပြီး ဘယ်အရာမှန်တယ်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား သိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ နောင်ကြီးလာရင်လည်း ဦး နှောက်ကို အသုံးပြုပြီး အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုကလေးမျိုးဟာ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်လာတာ ဒါမှမဟုတ် သူများ အပေါ် သနားကြင်နာ ရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ကလေး ငယ်တွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
♦ ဒဏ်ပေးတာက သူတို့ရဲ့ အပြုအမူဆိုးတွေကို ပြောင်းလဲမပစ်နိုင်ပါဘူး ♦
ကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါ၊ ပုန်ကန်ချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါ၊ လေးစားသမှုမရှိ တော့တဲ့အခါမှာ သင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီစိတ်တွေက ကလေးငယ်တွေ ဒဏ်ပေးခံရတဲ့အခါ မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ သင်က ကလေးငယ် တွေကို ဒဏ်ပေးတဲ့အခါမှာ သင့်အနေနဲ့ မကောင်း တဲ့အကျင့်တွေ ပျောက်ဖို့ သူတို့ကို သင်ကြားပေးနေ တယ်လို့ ထင်နေပေမယ့် အမှန်တကယ် ကလေးစိတ် ထဲ ထင်သွားတာက “တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိတဲ့အတွက် ဒဏ်ပေးခံရတာ၊ ဒါဟာအမှားလုပ်တာရဲ့ ရလဒ်လို့ပဲ သိရှိသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအသိအတွေးတွေ ကြောင့် သူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အပြုအမူကို ဘယ်လို ပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကို နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။
♦ ကလေးရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနိုင်ပါတယ် ♦
ကလေးအများစုက ဒဏ်ပေးခံရတဲ့အခါမှာ “ငါ့မိဘတွေက ငါ့ကိုမချစ်ဘူး၊ ငါဘာလုပ်လုပ် အမှား ထင်နေကြတယ်” လို့ တွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို တွေးမိတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးတွေ ထိခိုက်လာပြီး ယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးကာ ကြီးလာ တဲ့အခါမှာ စိတ်ရောဂါတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
♦ ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ♦
သင်က သင့်ကလေးငယ်တွေအမှားလုပ်မိလို့ ဒဏ်ပေးတာက သူတို့က သင့်ကို ကြောက်ရွံ့စေချင် လို့တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒဏ်ပေးတာက သင်နဲ့ သင့်ကလေးကြားမှာ အကြောက်တရားတွေ သာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးငယ်မျိုး တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သူတို့ တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိတာကို မိဘတွေ သိသွားမှာကို အမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့စိတ် တွေ ပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်အနားမှာ သူတို့က အမှားမလုပ်မိ အောင် သတိထားပြီး နေကြပေမယ့် သင်ရဲ့ နောက် ကွယ်မှာတော့ အမှားလုပ်မြဲအတိုင်း လုပ်နေတတ်ပါ တယ်။
♦ ကလေးနဲ့ မိဘကြား ဆက်ဆံရေး ယိုယွင်းနိုင်ပါတယ် ♦
ဒဏ်ပေးတဲ့အကျင့်က မိသားစုအတွင်း ချစ်ခင် စည်းလုံးမှု မရရှိနိုင်ပါဘူး။ သင်နဲ့ သင့်ကလေးကြား နံရံတစ်ချပ်ကာထားသလို ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား နားလည်မှုလွဲပြီး ဒေါသ တွေ ထွက်နေတာက နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ပျော်ရွှင် မှုမရရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သင့်အပေါ်မှာ ယုံကြည် ချစ်ခင်မှု ပျက်ပြယ်သွားပြီး သူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါမှာ သင့်ဆီက အကြံဉာဏ်ယူမယ့်အစား တခြား သူတွေဆီက အကြံဉာဏ်တွေ၊ အချစ်တွေပဲ ရယူ လာတတ်ကြပါတယ်။ တခြားသူတွေက ဒီလို အကြံဉာဏ်ယူတတ်ကြတဲ့အတွက် တစ်ခါတလေမှာ မှန် ကောင်းမှန်နိုင်သလို တစ်ခါတလေမှာ မှားယွင်းသွား နိုင်ပါတယ်။
♦ ပုန်ကန်မှုကို အားပေးသလို ဖြစ်နေပါတယ် ♦
ကလေးတွေကို ဒဏ်ပေးတာက သူတို့လိမ္မာဖို့အတွက် ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အပြင် စိတ်ခံစားချက် တွေ မှားယွင်းမှု ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်က ဆိုးသွမ်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရင် သင်က သူတို့ ကိုယ်သူတို့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရပြီး သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေကို ပြောင်းလဲစေချင်လို့ ဒဏ်ပေးပေ မယ့် သူတို့အနေနဲ့ သင့်ကို ပိုမိုမုန်းတီးသွားပြီး နဂို ထက် ပိုမိုဆိုးသွမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
♦ အာဏာသုံးပြီး အရာရာကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ်နိုင်ပါတယ် ♦
ကလေးငယ်ရဲ့ မျက်စိထဲမှာ မိခင်တွေက စွမ်း အင်နဲ့ အာဏာအရှိဆုံး လူသားလို့ ထင်မှတ်ကြပါ တယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဒေါနဲ့ မောနဲ့ အင်အားသုံးပြီး ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ မှာ သူတို့က အာဏာရှိရင် ဘာမဆို လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ်မှားသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးငယ် မျိုးက သူတို့ထက်အားနည်းတဲ့သူတွေ၊ သူတို့ကို ကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ခွန်အားသုံးပြီး အနိုင် ကျင့်လာတတ်ပါတယ်။
♦ ကလေးတွေကို ဒဏ်ပေးမယ့်အစား ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ ♦
♣ မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းကို စဉ်းစားထားပါ
သင့်ကလေးငယ်က ကုန်စုံဆိုင်တွေက ပစ္စည်း တွေကို လိုက်လံဆွဲချတတ်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကုန်စုံဆိုင် မသွားခင်မှာ သူတို့ရဲ့ ကစားစရာအရုပ် တွေ၊ စားစရာမုန့်တွေကို မိမိအိတ်ထဲ တစ်ပါတည်း ထည့်ထားပြီး ကုန်စုံဆိုင် ရောက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ကို အဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ အာရုံလွှဲလိုက်ပါ။
♣ သူတို့ကို ချစ်ကြောင်းပြသပါ
တစ်ခါတလေ ကလေးငယ်တွေက သူတို့ရဲ့ ကစားစရာအရုပ်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာ သင်က သူတို့ကို ချစ်တဲ့အမူအရာနဲ့ လှမ်းဖက်လိုက် ပါ။ အဲဒီအခါမှာ ကလေးတွေက သူတို့ဖျက်ဆီးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မေ့သွားပြီး သူတို့ကလည်း သင့် ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြသပါလိမ့်မယ်။
♣ သူတို့ကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ
ကလေးအသက် တစ်နှစ်ရှိတိုင်း စိတ်တည်ငြိမ် စေဖို့ အချိန်တစ်မိနစ် ပေးရမယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူ တွေက ဆိုထားပါတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့် အသက် သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးအတွက် သုံးမိနစ်) ဒီလို အချိန်လေးပေးထားပါမှ သင်ရော၊ သင့်ကလေးငယ် ရော စိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီး ကလေးလိမ္မာအောင် ဘယ်လိုသွန်သင်ရမလဲဆိုတာကို တွေးမိနိုင်ပါတယ်။
♣ သူတို့ဆိုးသွမ်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို လေ့လာပါ
ကလေးငယ် စိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘာ ဖြစ်လို့ မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာကို မေးကြည့်ပါ။ သူတို့မှာ ဒီလိုဆိုးသွမ်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကလေးငယ်တွေ က ပြောပြချင်ပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ရှည် လက်ရှည်နားထောင်ပေးပါမှ သူတို့ပြောပြနိုင်မှာပါ။
♣ ကလေးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စည်းကမ်းထုတ်ပါ
သင်က ကလေးကို သွန်သင်ဆုံးမထားပေမယ့် ကလေးက ဒါကိုမေ့ပြီး ပြုလုပ်မိရင် သူနဲ့အငြင်း အခုန်မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်မှာ အာဏာရှိတယ်ဆိုပြီး တစ် ချက်လွှတ်အမိန့်လည်း မထုတ်ပါနဲ့။ ကလေးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စည်းကမ်းထုတ်ထားပါ။ တစ်နေ့ကို တီဗီ ကြည့်ချိန် ဘယ်လောက်ဆိုရင်ကောင်းမယ်၊ ဘယ် အချိန်လောက်ပဲ ကစား၊ ဘယ်အချိန်မှာ စာလုပ်ကြ မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးပါမှ သူတို့က စည်းကမ်းလိုက်နာရ ကောင်းမှန်း သိလာပါလိမ့်မယ်။
♣ တောင်းပန်တတ်တဲ့အကျင့် သင်ကြားပေးပါ
ကလေးငယ်ရဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့အပြုအမူတွေ ကြောင့် သင့်စိတ်လွတ်သွားပြီး သူတို့ကို ဆူပူကြိမ်း မောင်းနေမယ့်အစား အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူ ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီး သူတို့ကို “အမှားတော့ ပြုလုပ် မိသွားပြီ။ ဒီတော့ ပြန်တောင်းပန်လိုက်ပါ”လို့ ပြော ပေးပါ။ ဒါ့အပြင် ကလေးငယ်တွေကို “လူတိုင်း ကတော့ အမှားလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအမှားကို ပြန်တောင်းပန်တတ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲ”လို့ သင်ကြားပေးပါ။
♣ သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေအတွက် တာဝန်ယူစိတ် ရှိအောင် သင်ကြားပေးပါ
မတော်တဆ နွားနို့ခွက်မှောက်ကျတာ၊ ပန်း ကန်ကွဲတာတွေကြောင့် သူတို့ကို ဒဏ်ပေးမယ့်အစား အဲဒီအပြုအမူတွေအတွက် တာဝန်ယူခိုင်းတဲ့အနေနဲ့ နွားနို့တွေကို သုတ်ခိုင်းတာ၊ ပန်းကန်ကွဲတွေကို သန့်ရှင်းစေတာလိုမျိုး ပြုလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။
Categories:	Article	/ by Good Health Admin March 19, 2020